जसका कारण उनको जिम सेन्टरमा जिम गर्न आउने ग्राहकहरुको संख्या धानी नसक्नुको
योपनि पढ्नुहोस्ः सुत्नुभन्दा पहिले एक गिलास तातोपानी पिउन आवश्यक
एजेन्सी। हामी स्वस्थ रहन चाहन्छौ भने दिनभरीमा ८ देखि ९ गिलास पानी पिउनु अत्यन्तै आवश्यक छ । चिसो मौसममा हल्का मनतातो पानी नै पिउनु फाइदाजनक हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । पानी स्वास्थ्यको लागि निकै महत्वपूर्ण पदार्थ हो ।
रातमा पाचन प्रक्रिया निकै तीव्र गतिमा हुने भएकाले सजिल्यै खाना पचाउनको लागि रातिमा तातोपानी पिउन आवश्यक हुन्छ । यदि हरेक दिन सुत्नुअघि १ गिलास तातोपानी पिउँदा खानालाई पचाउने, शरीरमा फ्याट जम्मा हुन नदिने र तौल घट्न मद्दत गर्छ ।
तातोपानीले थकान कम गराउने, छालामा चमक ल्याउने, उमेर कम देखाउने र कपालको लागि पनि फाइदा गर्छ । राति सुत्नुअघि तातोपानी एक गिलास पिउने गर्दा दिनभरीको थकान कम गर्ने र शरीरका विभिन्न भाग दुखेमा पनि फाइदाजनक हुने हुन्छ ।
त्यसैगरी तातोपानीले डिप्रेशन र तनाव पनि कम गर्ने भएकाले रातिमा सुत्नुअघि पिउँदा राम्रोसँग निन्द्रा लाग्ने र फ्रेस बनाउँन पनि मद्दत गर्छ । त्यतिमात्र होइन तातोपानीले हामीले खाएको खानेकुरामध्ये नचाहिने खानेकुरालाई घोल्ने काम गर्छ जसले गर्दा पाचन प्रक्रिया सही ढंगले सञ्चालन हुन पाउँछ ।
त्यतिमात्र होइन, तातोपानीले रगतलाई शुद्ध बनाउन गर्छ । जसले प्राकृतिक रुपमा नै रगत पातलो बनाउने हुँदा कोलेस्ट्रोलमा पनि तातोपानी फाइदाजनक हुनछ । रगतलाई राम्रोसँग घुलाउने भएकाले धमनीहरुमा रगत जम्न नपाउने हुँदा हृदयघातको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
जोसँग प्रेम गरिन्छ ऊ सँग विवाह गर्नै पर्छ र ?
एकथरी भन्छन् प्रेम र विवाह दुई फरक फरक कुरा हो । प्रेम गर्दैमा विवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अर्काथरी भन्छन्,जब प्रेम विवाहमा रुपान्तरण हुन्छ, तब मात्र प्रेम-सम्बन्ध सार्थक हुन्छ ।
जोसँग प्रेम गरिन्छ, उसलाई भावी जीवनसाथीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । कतिपयले क्षणिक मनोरञ्जनका लागि प्रेम गरिरहेका हुनसक्छन् । कतिले देखासेखीमा । त्यसैले प्रेमी/प्रेमिकाको रुपमा जोडिन आउने जो कोहिसँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, कहिले काहिँ त्यस्तै प्रेमी/प्रेमिकासँग बिवाह गर्न पुगिन्छ । र, यस्ता दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने छैन ।
पार्टनरको आनीबानी बुझ्नु आवश्यक
प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला आफ्ना प्रेमी/प्रेमिकाको आनीवानी, व्यवहार, सोच चिन्तन, उदेश्य, अपेक्षा सबै कुरा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । आफ्ना प्रेमी/प्रेमिकाले आफुसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् ? आफुलाई कुन रुपमा हेरेका छन् ? त्यसबारे बुझ्नुपर्छ ।
कस्ता प्रेमी/प्रमिकासँग जीवन बिताउन सकिन्छ ?
यदि प्रेमी/प्रेमिकाले आफ्नो हरेक कुरामा चासो रख्छ, स्वास्थ्यस्थितीमा ख्याल राख्छ, पारिवारिक कुरा जान्न उत्सुक रहन्छ, करियरका लागि सरसल्लाह दिन्छ भने उनीहरु भावी जीवनसाथीको रुपमा स्विकार्न सकिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कुनै न कुनै रुपमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने, दुखसुख साझेदार गर्ने प्रेमी/प्रेमिकासँग बिवाह भएमा त्यस किसिमको दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ ।
आफ्नो स-सानो कुरामा ख्याल राख्ने, कस्तो लुगा सुहाउँछ/कस्तो सुहाउँदैन, के खायो, के खाएन भन्ने कुरामा यदि चासो राख्छन् भने त्यस्ता प्रेमी/प्रेमिका जीवनसाथीको रुपमा उपयुक्त हुन्छन् ।